ओपनह्याब - स्मार्टमे
डोम » ओपनह्याब
खुला गृह स्वचालन बस टेक्नोलोजी एक खुला स्रोत गृह स्वचालन सफ्टवेयर हो। यसले प्रदान गर्ने संभावनाहरू विशाल छन्, त्यसैले यसका बारे पत्ता लगाउन लायक छ। उपकरण परीक्षणहरू र ओपनएचएबी प्रयोग गर्ने छाप, जुन तपाइँ हाम्रो वेबसाइटमा फेला पार्नुहुनेछ, समाचारहरू पछ्याउनको लागि उत्तम तरिका हो।
हीटिट थर्मोस्टेट - Z-Wave पछि थर्मोस्टेट को समीक्षा
गर्मी, ओपनहाब, थर्मोस्टेट
के तपाईंलाई थाहा छ म मेरो घरमा यति धेरै पछुतो गर्छु? मैले एक बर्ष पहिले निर्णय गरें कि मलाई स्मार्ट थर्मोस्टेट्स चाहिदैन। डिजिटल पर्याप्त छ, हैन? खैर, दुर्भाग्यवस हैन ... भाग्यवस, मैले Z-Home स्टोरबाट धेरै उपकरणहरू प्राप्त गरें, ...